AudioSourceRE Vocal Drum Bass & Instrument Ukususa Software
Thola mayelana ne-new yethu I-Enterprise API | Izilingo zamahhala ezifakiwe ngokugcwele ezingama-7 ze- DeMIX Pro futhi RePAN Xhuma nazo ziyatholakala.
ISIQINISEKISO SAMAKHAYA ASEPHAKEME NOKUSUSWA KOKUSUSA ISOFOFAWUTHI
Dala ama-STEM kanye neKaraoke kalula futhi ngokushesha nge-AI ethuthuke kakhulu demixubuchwepheshe obutholakala emakethe.
Ama-algorithms wokuhlukanisa umsindo we-AI ahlanganiswe namathuluzi wokuhlela we-spectral angonakalisi.
Susa amagama, izigubhu, ama-bass nezinye izinsimbi zomculo kusuka kunoma yimuphi umthombo womsindo oxubekile!
Isoftware eguquguqukayo nenembile egqugquzela noma ngubani endimeni yomculo noma eposini-proisifiso.
AUDIOSOURCERE I-SOFTWARE NE-PLUGINS
Thenga DeMIX Pro
Ihlanganisa ama-algorithms wokuhlukanisa umsindo we-AI onqenqemeni ngokuhlelwa komsindo okuthuthukile okususelwa ekubukeni. Inika umsindo professionals amandla angenakulinganiswa okususa izingoma, izigubhu, ama-bass, nezinsimbi kumxube.
Ukuhlukaniswa kwesiginci sikagesi kulapha ngenguqulo 3
Qhubeka usekela amazwi engoma yakho yezinsimbi ukuze uthole amathrekhi angcono asekelayo/e-karaoke
Inkinobho entsha engu-4 yesiqu ihlukanisa iphimbo, ibhesi, isigubhu nezinye iziqu ngasikhathi sinye.
Inkinobho entsha 'ezinye' zokuhlukanisa izinsimbi ezifakiwe, kusetshenziswa i-algorithm entsha yokuhlukanisa.
Lawula mathupha futhi ulondoloze ukuphefumula kwezwi nokuphinda uqambe nge-Vocal Noise Gate yethu.
Ukuhlukaniswa okungcono kwezwi nokuphazamiseka okuncane kakhulu kweminye imithombo kuzwi lakho elihlukanisiwe
Ukwenza kusebenze ngokushesha futhi okulula pronqubo
Ukulanda okusheshayo nokuzinzile
Amathrekhi Wokuhlukaniswa Okungalingani
Kususelwa futhi kuphephe ngamafu Proukukhala
Usekela kuze kufike ku-24bit 192kHz Audio
Thenga DeMIX Essentials
Ama-algorithms wokuhlukaniswa kwe-AI athuthukile nokuhamba komsebenzi okunembile. Isusa kalula izingoma, izigubhu, ama-bass, nezinsimbi. Ilungele ama-DJ, proama-ducers, nabaculi abenza izingoma ezisekelayo, amasampula noma ama-remix kusuka kumsindo okhona.
Improukwahlukaniswa kwezwi kwe-ved kunokuphazamiseka okuncane kweminye imithombo kuziqu zakho zezwi ezihlukanisiwe
Inkinobho entsha 'ezinye' yokuhlukanisa amathuluzi afakiwe, kusetshenziswa i-algorithm yethu yokuhlukanisa entsha
I-customizable Sepgment Algorithms
Usekela kuze kufike kumsindo we-16bit 44.1 kHz
Hlukanisa uphinde ulungise i-stereo ku-fly usebenzisa i-plug-in yethu yesikhathi esizayo somsindo we-panning. Lungisa ububanzi bese ulandisa kabusha ivolumu yokuxuba okukhona ngesikhathi sangempela. Lawula ukuthi ufuna ukuzwa kanjani umculo.
I-plugin Yokwahlukaniswa Kwangempela
Ihambisana nobubanzi obuningi be-DAW
Remix, Rebalance & Re-pan endizeni
Ukwahlukaniswa komthombo Multif -able controll
I-VST, AU ne-AAX plugin Format
DJs & Abaculi
Pro Imfundo Yomsindo
BHEKA AUDIOSOURCERE ESENZO
Remix ngokushesha nge DeMIX Pro
Amathrekhi ahlukanisiwe angenamkhawulo namathuluzi wokuhlela we-spectral anamandla akunikeza ukulawula okungakaze kubonwe ezintweni ezithile zomunye umxube wokulalelwayo. Phendula kabusha ivolumu noma isikhundla se-pan yanoma iyiphi ithrekhi ehlukanisiwe bese ulungisa noma iyiphi indlela ofuna ngayo!
Remix nge DeMIX Essentials
Lapho usuhlukanise amathrekhi akho, kulula ukwenza ukulungisa okusheshayo usebenzisa DeMIX Essentials. Sebenzisa i-mixer eyakhelwe ngaphakathi ukuze ushintshe ivolumu yama-vocals, izigubhu, ama-bass, noma amathrekhi wokusekela noma ufake kabusha imithombo endaweni ethile ehlukile enkanjini ye-stereo. Ukukhetha kungokwakho!
Ukuhlukaniswa kwesitiriyo se-Pan-time yangempela
Hlukanisa futhi uhlanganise kabusha usebenzisa isikhathi sangempela RePAN, i-plugin yethu esekwe ngokuhlukaniswa ne-pan esekela wonke ama-DAW amakhulu. Kutholakala ngamafomethi we-AAX, VST, ne-AU we-Mac ne-Windows.
Joyina Newsletter Wethu
Ungazikhipha ohlwini lwalokhu kuxhumana noma nini. Ukuze uthole ulwazi lokuthi ungazikhipha kanjani ohlwini, kanye nezinqubo zethu zobumfihlo nokuzibophezela kukho proihlola ubumfihlo bakho, sicela ubuyekeze Inqubomgomo yethu Yobumfihlo.
Silandele Kuma-Social Media
© Copyright AudioSourceRE I-DAC 2022
Isivumelwano Selayisense Yomsebenzisi Wokugcina
Inqubomgomo Yobumfihlo ne-Cookie
Thola Uhlelo Lokusebenza?
Amakhukhi? Yamukela Bheka Inqubomgomo Yobumfihlo Nekhukhi